Fifidianana · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Marsa, 2011
Karaiba 20 Marsa 2011
Senegal: 19 Martsa, Andron'ny Hetsika
Afrika Mainty 19 Marsa 2011
Mitsoka manerana an'i Maghreb sy Atsinanana Afovoany ny rivotry ny fikomiana. Maneho ny tsy fifaliana amin'ireo firiorion'ny governemantany ny mpanohitra. Voafidy ho daty hanaovana ireo fihetsiketsehina ao amin'ny firenena ny 19 Martsa 2011.
Nizeria: Tetikasa “Mitsangàna Naija 2011″ [StandUp Naija]
Afrika Mainty 17 Marsa 2011
Amin'ny 9 aprily 2011 ny fifidianana Filoha Nizeriana. Inona no antenain'ny mpifidy Nizeriana? Karazana horonan-tsarimihetsika manana ny lanjany tokoa ny Mitsangàna Naija izay manasongadina ny hetahetan’ ny ankamaroan'ny Nizeriana salantsalany sy ny tokony asongadin'ny tontolo politika hatolony amin'ny fifidianana 2011. Tetikasa nataon'ny The Nigeria Leadership Initiative (NLI) ny StandUp Naija. Asa: Fampianarana: Herinaratra:...
Côte d'Ivoire: Nankaiza ny Jeneraly Philippe Mangou ?
Cote d'Ivoire 17 Marsa 2011
Nafana ny andro Alatsinainy 14 martsa tao Côte d'Ivoire ary koa teo amin'ny tontolon'ny bilaogy sy ny tontolon'ny Twitter. Any Abidjan, taorian'ny herisetra tao amin'ny faritra Abobo tamin'ity herinandro ity, taitra tamin'ny torimasony ny Ivoarinina noho ny tifitra kalachnikov sy fitaovampiadina lehibe tao amin'ny faritra Yopougon, mandatehezan'i Laurent Gbagbo, filoha teo aloha...
Côte d'Ivoire: Facebook sy Twitter, Mpitondra ny hafatr’ Ifahafatesana
Niharatsy haingana dia haingana [fr]ny toe-draharaha politika any Cote d'Ivoire ifanandrinan'ny mpitarika roa tonta, Laurent Gbagbo sy Alassane Ouattara – samy milaza ho nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny Desambra. Raha hita mbola sahirana mifantoka amina krizy mihoatra ny iray ny haino aman-jery iraisampirenena amin'ity tadio politika any amin'ny faritra Afovoany...
Arabia Saodita: Inona no tadiavin'ny vahoaka?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Marsa 2011
Raha nameno ny faritra ny fihetsiketsehana, dia nampiaka-peo koa ny Saodiana. Efa nivezivezy ny fanangonan-tsonia omena ny Mpanjaka Abdulla, misy ny fangatahana mikatsaka ny fanovana politika maro. Ny fangatahana, nomena anarana hoe ” Firenena manana ny zo sy ny lalàna fototra” dia azo jerena ao amin'ny aterineto, ahitana fitakiana mitotaly valo, nosoratana...
Masedonia: Tsy azo ihodivirana ny fifidianana atsy ho atsy, ny daty no tsy fantatra
Eoropa Afovoany & Atsinanana 04 Marsa 2011
Mitatitra ny fanapahan-kevitra ny hanaovana fifidianana atsy ho atsy any Masedonia sy ny fihetseham-pon'ny mpitoraka bilaogy amin'izany i Filip Stojanovski.